Mkpu: Ntughari ọdịyo na vidiyo, ntụgharị, Nkọwapụta, na ndepụta okwu | Martech Zone
Ebe ọ bụ na ndị ahịa anyị bụ aka ọrụ aka, ọ na-esiri anyị ike mgbe ụfọdụ ịchọta ndị edemede nwere ma okike ma ndị maara ihe. Ka oge na-aga, ike gwụrụ anyị maka imegharị, dị ka ndị na-ede akwụkwọ anyị, yabụ anyị nwalere usoro ọhụrụ. Anyị nwere usoro mmepụta ebe anyị debere obere obere Podcast studio Na ọnọdụ - ma ọ bụ anyị kpọọ ha - anyị dekọọ pọdkastị ole na ole. Anyị na-edekọ ajụjụ ọnụ na vidiyo. Anyị na-eziga ọdịyo na vidiyo ahụ maka ndetu na ntinye ederede. Anyị na-enyezi ndị edemede anyị ntụgharị ahụ ndị jikọtara ha na isiokwu anyị na-ebipụta na blọọgụ ndị ahịa ma ọ bụ nyefee saịtị nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Companylọ ọrụ anyị na-eji maka nke a bụ Rev, nke ụlọ ọrụ vidiyo dị ịtụnanya anyị na-arụ ọrụ na-atụ aro, Zụọ 918. Ahịa dị ọnụ, ntụgharị dị ịtụnanya, na iru eru nke transcript abụwo ọkwa kachasị. Ka anyị na-asọ ndị ahịa anyị ka ọ na-abanyekwu na vidiyo, anyị na-achọ itinye vidiyo na ezigbo oge ebe ọ bụ na ọtụtụ nyiwe ga-elele vidiyo na-egwu egwu. Rev na-enye ọrụ a dị ka nke ọma. Rev na enye ndi oru ndia:
Ndegharị Audio - otu ìgwè ndị na-edegharị ederede na-ewe ndekọ ndekọ gị ma depụta ha na 99% ziri ezi. Bulite faịlụ gị site na weebụ ma ọ bụ iPhone Transcript Ngwa, ma nweta ederede zuru ezu ozugbo elekere 12. Ndị mmadụ na-eme ntụgharị, ọ bụghị sọftụwia amata okwu, yabụ ha nwere ike ijide nuance na oke ziri ezi karịa sọftụwia. Rev nwere ike ijikwa ụdị ụdị ọdịyo ọ bụla (gụnyere MP3, AIF, M4A, VOB, AMR, na WAV).
Ndepụta vidiyo - a otu transcriptists ewe gị video ndekọ na transcribes ha 99% ziri ezi. Bulite faịlụ gị site na weebụ, wee nweta ederede zuru ezu ozugbo elekere 12. Rev video ọkachamara na aka transwriting okwu ọnụ na mkpa na-abụghị ọnụ nke gị video na mmezi nkebi ahịrịokwu ahụ na ihuenyo ugboro. Rev nwere ike ijikwa ụdị video ọ bụla (gụnyere MP4, WMV, M4A, MOV, AVI, VOB, AMR, WMA, OGG). Rev nwekwara njikọta na Youtube na Kaltura.
Ntinye vidiyo - Niile caption faịlụ na-FCC na ADA Dabara na izute Nkebi 508 chọrọ. Captions dị na Apple, Amazon, Netflix, Hulu na ụkpụrụ ndị ọzọ. Ndị ahịa nwere ike ịhọrọ n'etiti ọtụtụ faịlụ faịlụ (niile enweghị ụgwọ ọzọ): SubRip (.srt), Scenarist (.scc), MacCaption (.mcc), Ederede Oge (.ttml), Ederede Oge Oge (.qt.txt) , Transcript (.txt), WebVTT (.vtt), DFXP (.dfxp), Cheetah .CAP (.cap), Spruce Subtitle File (.stl), Avid DS Subtitle File (.txt), Facebook dị njikere SubRip (.srt) ), XML (.xml), na ndị ọzọ. Nyefee faịlụ vidiyo gị, njikọ nke vidiyo gị echekwara (ikpo okwu vidiyo n'ịntanetị, FTP, Dropbox, wdg), ma ọ bụ tinye na API ha. Ga-enweta faili nkọwa nke ị nwere ike iji ozugbo, bulite na nhọrọ ịntanetị ị họọrọ (dịka Vimeo, Wistia), ma ọ bụ buru ibu na ngwanrọ na-edezi vidiyo gị (dịka Adobe Premiere Pro, Apple Final Cut Pro).
Ndepụta Okwu Video - Rev mepụtara faịlụ asụsụ mba ọzọ maka vidiyo. Ndị ọrụ ntụgharị ha ọkachamara jiri akara ntinye ederede nnabata akwadoro ndị ahịa na vidiyo gị iji mepụta faịlụ sobtaitel n'ọtụtụ asụsụ na usoro. Site na ndabara, Rev sobtaitel faịlụ ndị FCC na ADA Dabara. Asụsụ ntụgharị asụsụ gụnyere Arabic, Bulgarian, Cantonese, Chinese (nke ọdịnala na nke dị mfe), Czech, Danish, Dutch, Farsi, French, Georgia, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Italian, Indonesian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Romanian, Russian, Slovak, Spanish (European, Latin America, American Hispanic), Swedish, Tagalog, Thai. Turkish, Ukraine, na Vietnamese.
Rev na-egosiputa vidio maka nkuzi n'ịntanetị, ọzụzụ, azụmahịa, ngwa ahịa, ihe nkiri eserese, ihe nkiri nọọrọ onwe ha, yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ndekọ ọ bụla. eserese, na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ndekọ ọ bụla. Ntinye ederede na vidiyo na-eri $ 1.00 kwa nkeji vidiyo, nwee ezi 99%, yana ntụgharị oge elekere 24, yana nkwa 100%.
Gbalịa Rev Taa!
ngosi: Anyị na-eji njikọ Ntuziaka na post a ma kwụghachi ụgwọ maka ndị ahịa ọ bụla anyị wetara Rev.
Tags: AIFamazonOnye America Hispaniki)AMRapụlarabicntụgharị okwuỌrụ Ntugharị AudioAVIuchu ds sobtaitel faịlụBulgarianCantonesecheetahChinese (ọdịnala ma dị mfe)CzechDanishOyiboDK New MediaDutchisi okwu facebookfacebook njikere subripFarsifrenchGeorgianGermanGreekHibruHindihuluHungarianIndonesianItalianJapanKoreanLatin AmericaAKWỤKWỌmaccaptionMOVmp3MP4NetflixNorwegianOGGPolishPortuguese (Brazil)Asụsụ Pọtụgal (Pọtugal)ederede ngwa ngwaMkpuchiRomanianRussianọkà mmụtaSlovakAsụsụ Spanish (Europeanfaịlụ spruce sobtaitelsubripSwedishTagalogThai. Turkishederede ogetraingbọ 918transcriptUkraineEderede Vidiovideo sobtaitelvideo ndepụta okwuntụgharị vidiyoỌrụ Ntugharị vidiyoVietnameseVOBWAVwebvttWMAWMVXML